Fiara Koreana mpamonjy voina Hyundai, Kia, lavanty GM Daewoo Ssangyong
Incheon City, Korea atsimo
Mon - Zoma 09.00 - 19.00
Fiara efa niasa Premium
Torolàlana ho an'ny mpividy
Kaomandy ho an'ny fiara Salvage
Fitaovana mandeha fiara efa niasa
Ampio ny entanao
Midira na mailaka
Hividianana fiara Ny sehatra iraisam-pirenena momba ny varotra fiara iraisam-pirenena dia manome serivisy azo antoka sy kalitao hamonjy fiara, kamio, bus, fitaovana, mpividy fiara manerantany manerantany avy any Korea Atsimo. Jereo ny fiara taloha any Korea
Midira amin'ny lavanty
2005 HYUNDAI MAHAY INDRINDRA AMIN'NY FITIAVANA
2012 KIA MARAINA
Fiarovana amin'ny fandoavam-bola 100% mandra-pahatapitry ny fifanakalozana sy fandefasanao.
Ny vavahady ho an'ny mpividy manerantany hividianana fiara sy fiara mandeha amin'ny fiara an-tserasera.
Serivisy ho an'ny mpanjifa iraisam-pirenena miorina sy haingana amin'ny traikefa fividianana seamless.
Milamina sy feno
Ataovy azo antoka sy fenoy ny fomba fanavaozana mety ho an'ny zavatra niainanao mividy mahavariana.
2014 KIA MARAINA
Vaovao momba ny varotra UCKN
Azafady mba jereo ny vaovao farany momba ny varotra, anisan'izany ny torohevitra, tetika ary torolàlana voafantina mba hahatongavanao any amin'izay alehanao ary hamadika ny traikefa niainanao ho traikefa tsara indrindra.
Fanamarihana Import Import an'ny Mongolia
Taona fameperana tsy misy famerana taona dia ilaina ny volavolan-dalàna momba ny fametahana fiara izay tsy maintsy aseho ny chassis sy ny motera isa, ny fahaizan'ny cubic, ny taona nanamboarana, ny marika ary ny maodely. Fifanarahana momba ny fahazoan-dàlana hitondra fiara Manifest Drivers & Fiantohana fiantohana faktiora momba ny fitaterana faktiora ara-barotra / fividianana faktiora momba ny fandoavam-bola amin'ny fividianana kalitao amin'ny fifehezana kalitao ny entana Lisitry ny fonosana…
Tajikistan Fanamarihana fanafarana fiara efa niasa
Herintaona fameperana tsy misy antontan-taratasy fameperana takiana ny fifanarahana fividianana fiara na ny antontan-taratasy tany am-boalohany Fahefana mpisolovava hanome alalana ny famindrana Kopian'ny pasipaoro na visa maharitra Lohateny sy ny boky fampianarana ara-teknika Ny fiara dia mila fizahana. Ny fiara dia tsy maintsy mihoatra ny 6 volana, fa latsaky ny 10 taona Fanamafisana ny asa…
Fanamarihana fanafarana fiara ampiasaina any Kambôdza
Feperana taona Mihoatra ny 15 taona ny fiara efa be taona no handoavan-ketra be Documents Required Bill of Lading tany am-boalohany izay tsy maintsy aseho ny chassis sy ny motera isa, ny fahaizan'ny cubic, ny taona nanamboarana, ny marika ary ny maodely. Fifanarahana momba ny fahazoana mitondra fiara Manifest Drivers Fahazoan-dàlana & Fanamarinana fiantohana faktiora momba ny fitaterana faktiora ara-barotra / fividianana fahazoan-dàlana amin'ny fandoavambola faktiora…
Politikan'ny tsiambaratelo ho an'ny mpividy
Politikan'ny tsiambaratelo ho an'ny mpivarotra
Fepetra sy fepetra ho an'ny mpividy
Fepetra sy fepetra ho an'ny mpivarotra
© 2021 FIASA KOREA FIASANy mari-barotra sy ny marika dia fananan'ny tompony avy.
Mametraha App Mobile
Ampidiro ao amin'ny iPhone ity usedCarKorea.Net ity
ary avy eo Ampio ao amin'ny efijery an-trano
Mangataka ny vidin'ny fiara